एडभर्टाइज् गर्ने तरिकाले मन छोयो [ भिडियो एड ] - Own Things ~ आफ्नै कुरा
एडभर्टाइज् गर्ने तरिकाले मन छोयो [ भिडियो एड ]
प्रकाशित गरिएको मिति : 12 August 2014
यहाँ मैले फेडेरल बैंक को एड गर्न खोज्या होइन .. तर उसले गर्ने क्रिएटिभ र पोजिटीभ सन्देश सहितको एडभर्टाइज् गर्ने तरिकाले मन छोयो .. त्यसैले त्यसको एउटा भिडियो यहाँ तपाइँ हरुको लागी शेयर गर्दै छु ! तपाइँ नि एक पटक हेर्नु हुन्छ कि ?
हेर्नुस न भिडियोमा प्रयोग गरिएको शब्द र स्टोरीमा कति मिठासपन छ ! हेरी रहू लाग्छ यस्ता भिडियोहरु !
Federal Bank को अरु पनि भिडियो एड हेर्न चाहनु हुन्छ भने यहाँ किल्लिक गर्नुस ! अनि तपाई लाइ नि त्यस्तै मन छुने एड या डकुमेन्ट्री छ भने मलाइ कमेन्टमा सजेस्ट गर्न नभुल्नु होला !